Magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gaba-gabeeyay shirka Madasha wadatashiga madaxda Soomaalida ee Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada oo mudo isbuuc ka badan Caasimada kasocday. Ilo Xog ogaal ah ayaa sheegaya in ay wax walba oo ay sameeyeen madaxdu hadana aaanay jirin talaabo horay loo qaaday iyadoo inta badan qodobada kasoo baxay shirka ay yihiin kuwo lagu tusayo Bulshada...
Waaxda Arrimaha Dibbada Maraykanka qeybteeda u qaabilsan Afrika ayaa ka walwalsan in dhaqaalaha la siiyo dowlad Soomaaliya inay u wareegto ururka Al-Shabaab oo Soomaaliya ka wada dagaal ay ku arqaladaynayaan nabadgalyada. Qaybta dabagalka Wasaarada Arrimaha Dibada Maraykanka ayaa walaacan muujisay iyadoo sarkaal ka tirsan Wasaarada Arrimaha Dibada Maraykanka ayaa...
Inta la xaqiijiyay labo qof ayaa ku dhaawacmay gaari qarax lagu soo xiray oo ku qarxay isgooyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Amaanka Caasimada ayaa dhawaanahan soo hagaagayay ayay u muuqata in habacsanan badan uu hada wajahayo iyadoo qaraxyo dhawr ah oo Caasimada ka dhacay ay boqolaal qof ku dhinteen. Ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa isku diyaarinaya hawlgal Al-Shabaab...
Magaalada Muqdisho waxaa mudo Todobad ku dhaw kasocda shir ay yeelanayaan madaxda Dowlada Federaalka iyo madaxweynayaasha dowlad Goboleedyada. Wararkii ugu danbeeyay waxaa ay sheegayaan in la isku raacay arimaha amaanka balse wali loo maaro la’yahay arimaha Siyaasada iyo dhaqaalaha iyadoo si aad ah loogu kala fogyahay gaar ahaan shaqaaqooyinkii dhawaan ka dhacay...
Muqdisho, November, 01, 2017. Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa caawa casho sharaf ugu sameeyay Magaalada Muqdisho Xildhibaanada labada gole ee laga soo doortay Jubbaland. Kulankan wuxuu ahaa mid Madaxweynahu uu Xildhibaanada uga xog-waramayay xaaladaha deeganada Jubbaland iyo mid guud ee dalka gaar ahaan Arimaha...
Madaxda Dowlad goboleedka jubbaland iyo Shacabka reer kismaayo ayaa maanta si wada jir ah dareenkooda ugu muujiyey walaalahooda reer muqdisho ee waxyeeladu kasoo gaartey qarixi zoobe ee magaalada muqdisho. Madaxweyne kuxigeenka Jubbaland suldaan luga dheere , Gudoomiyaha Baarlamaanka Sheekh cabdi , Taliyaha nabadsugida Khaalid sheekh cabdulahi ayaa kamid ahaa masuuliyiintii...
Waraaq kasoo baxdey xafiiska madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cabdi Awaare ayaa lagu sheegey inaysan kuraacsaneyn go’aanka ay maamul goboleedyada dalku ka qaateen arrinta murugsan ee maamul goboleedka galmudug ka taagan. Maanta ayaa waxaa soo baxey warmurtiyeed ay kumideysanyihiin Maamul goboleedyada kala ah Puntland ,Jubbaland , Koonfur galbeed...
September (22, 2017) Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre iyo wafdiga la socda ee ku sugan Magaalada Newyorka ayaa kulan la qaatay madax ka socota wadamada ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya. Kuwaas oo sida xubnaha dowladu noo xaqiijiyeen ka wada hadlay arrimo la xariira Xoojinta xariirka wadamadaas ay la leeyihiin Soomaaliya, Horumarinta howlgalada ka dhanka ah Nabad...
(September 22 2017) wafdi ka socda dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo uu hogaaminayo wasiirka iskaashigga iyo xiriir caalamiga Feyruus Xaaji Xuseen iyo xildhibaanno ka tirsan Jubbaland ayaa gaaray dalka Mareykanka. Wafdigan waxaa sidoo kale qeyb ka ahaa Gudoomiyaha rugta Ganacsigga iyo warshadaha Jubbaland Shaafi Raabi Kaahin. Ujeedka wafdigan ayaa lagu sheegay...